Забур 128 CARS - Nnwom 128 ASCB
1Nhyira ne wɔn a wɔsuro Awurade,
na wɔnante nʼakwan so.
2Wobɛdi wʼadwuma so aba;
nhyira ne yiedie bɛyɛ wo dea.
3Wo yere bɛyɛ sɛ bobe a ɛso aba
wɔ wo fie;
na wo mmammarima ayɛ sɛ ngo dua a afifiri
atwa wo ɛpono ho ahyia.
4Yei ne onipa a wɔahyira noɔ,
deɛ ɔsuro Awurade no.
5Awurade nhyira wo mfiri Sion
wo nkwa nna nyinaa;
na ɔmma wo nhunu Yerusalem nkɔsoɔ,
6na ɔmma wo ntena ase nhunu wo mma mma.
ASCB : Nnwom 128